समुद्रशास्त्र अनुसार यस्तो आकारको अनुहार भएका महिलाहरु हुन्छन् संसारकै भाग्यमानी! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > समुद्रशास्त्र अनुसार यस्तो आकारको अनुहार भएका महिलाहरु हुन्छन् संसारकै भाग्यमानी!
admin January 8, 2021 जीवनशैली	0
भनिन्छ, अनुहार व्यक्तित्व र मनको दर्पण हुन्छ। तर धेरै कम मान्छेलाई यो कुरा थाहा छ कि अनुहार भाग्यको पनि दर्पण हुन्छ। समुद्रशास्त्रमा व्यक्तिको अंगहरु र अनुहारको बनावटको आधारमा प्रकृति, भाग्य र भविष्यको बारेमा बताइएको छ। समुद्रशास्त्रमा भगवान शिवको पुत्र कार्तिकद्वारा यस कुरा लेखिएको मानिएको छ । आउनुहोस यसमा तपाईको अनुहारको बनावट अनुसार के भनिएको छ। एकपटक अवस्य हेर्नुहाेस्
१. अन्डाकार अनुहार: अण्डा आकारको अनुहार भएका व्यक्तिहरू आकर्षक व्यक्तित्वको मालिक मानिन्छ। यस्ता अनुहारहरू विज्ञापन र फिल्म उद्योगमा धेरै रुचाईइन्छ । तिनीहरूसँग आफैमा अत्यधिक नियन्त्रण हुन्छन् । कुनै पनि अवस्थामा यी मानिसहरू आफैले यसलाई अनुकूल गर्दछ।
२. लामो पातलो अनुहार: हेर्नमा यिनीहरुका अनुहार पातलो भएपनि शारीरिक रूपमा यो मान्छे धेरै नै मजबूत हुन्छन्। आफैलाई र आफ्नो आसपासको वातावरणलाई सदैव व्यवस्थित राख्नको लागि यस्ता मान्छे केहि पनि गर्न सक्छन् । यो मानिन्छ कि धेरै पटक उनीहरूको कठोरताले उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा समेत नराम्रो असर पर्छ ।
३. त्रिकोणाकार अनुहार: यदि अनुहार त्रिकोणसँग समान छ भने यसको अर्थ हो कि तपाईं एकदम रचनात्मक हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो तरिकाले मनपर्ने सबै काम गरेर आनन्द लिनुहुन्छ । अनावश्यक हस्तक्षेप मनपर्दैन। कला संसारमा यस्ता मानिसहरू धेरै भाग्य हुन्छन्।
४. वर्गाकार अनुहार: वर्गाकार अनुहार भएका मानिसहरू धेरै बुद्धिमानी हुन्छन् । तर यीनीहरू धेरै क्रोधी स्वभावका हुन्छन् । यस्ता दम्पतिका विशेष गरी महिलाहरु उनीहरुका इच्छाअनुसार अरुसँग काम गर्न चाहन्छन्। तिनीहरूसँग नेतृत्व गर्ने राम्रो सम्भावना हुन्छ र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै सफल हुन्छन् ।
५. गोलाकार अनुहार : समुन्द्रशास्त्र अनुसार गोलाकार अनुहार भएका मानिसहरू सबैभन्दा भाग्यशाली मानिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रकृतिसँग धेरै संवेदनशील हुन्छन् र साथसाथै निकै भावुक पनि हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्ध सधैं सफल र सुखद रहन्छ। साथै यस्ता मानिसहरू जीवनसाथीको निम्ति अति नै लायक मानिन्छ ।
कोरियामा रहेका नेपाली बिद्यार्थीलाई कोरिया सरकारले दियो यस्तो खुशीको खबर
यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट, सम्मानका लागि शेयर गराैं
विदेशमा बस्ने नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियोः पार्वती जस्तै श्रीमती भए यसरी जीवन फेरिन्छ, जसका श्रीमान अरबमा थिए(भिडियो सहित)